Barakac xoogan oo ka bilowday Magaalada Gaalkacyo iyo sharma'rke oo ku wajahan magaldaas * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MAREEG	 On Nov 26, 2015
Kulan kale oo maanta la filayay in lagu qaboojiyo Xiisadda Magaalada Gaalkacyo ayaa baaqday taas oo la sheegay in ay ugu wacneed Xildhibaanno Baarlamaanka Puntland ka tirsanaa oo kulanka in ay ka soo qeyb galaan loo ballansanaa oo aan imaan.
Sidoo kale Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku soo kordhaya barakaca ay sameynayaan shacabka degenaa Magaaladaasi oo dagaal kale cabsi ka qaba.
Labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ayaa kala xirtay aagag cusub iyadoo midba Ciidamo dheeraad ah uu geeyay meesha ay isku hor fadhiyaan ee nawaaxiga Xaafadda Garsoor ee Magaalada Gaalkacyo.
Xiisaddaan ayaa soo billaabatay 22 November 2015 oo dagaal uu Magaalada Gaalkacyo gudaheeda ku dhexmaray Ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug. sidoo kale : -Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hokacayo ayaa ku wajahan Magaalada Gaalkacyo.
Ra’iisul Wasaaraha wafdigiisa ayaa waxaa ka mid ah Xubno labada gole ee dowladda Federaalka ka tirsan oo ka soo jeeda Gobolka Mudug oo uu ku jiro Wasiirka Wasaraadda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Max’ed Xuseen Odawaa.
Xaaladda Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa ahayd mid kacsan maalmihii la soo dhaafay kadib dagaal halkaas ku dhexmaray Ciidamo kala taabacsan Maamullada Galmudug iyo Puntland.
Waxaa laga dhur sugi doonaa Booqashada Masuuliyiintaas waxa ay ku soo kordhiyaan xaaladda kacsan ee ka jirta Magaalada Gaalkacyo hadda.